Maitiro matsva eRowHammer akagadzirwa kupfuura ECC | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro matsva eRowHammer akagadzirwa kudarika ECC dziviriro
Boka revatsvagiri vanobva kuYunivhesiti Yemahara yeAmsterdam yakagadzira vhezheni itsva yeRowHammer, iyo inobvumidza izvo zvemukati mezvimedu kushandurwa mundangariro zvichibva paDRAM machipisi, kuchengetedza kutendeka kwekanganiso yekugadzirisa makodhi (ECC) anoshandiswa.
Kurwiswa kunogona kuitwa kure pamwe nekusawana mukana kuwana sisitimuSezvo kunetsekana kweRowHammer kunogona kukanganisa zvirimo zvemunhu bits mundangariro nekuverenga zvakatenderedza dhata kubva kune dzakavakidzana ndangariro maseru.
1 Chii chinonzi RowHammer kutambura?
2 Musiyano mutsva weRowHammer
2.1 Musiyano mutsva uyu unoshanda sei?
3 Nezve demo
Chii chinonzi RowHammer kutambura?
Kune izvo zvinotsanangurwa neboka revatsvakurudzi nezvekushushikana kweRowHammer, ndezvekuti izvi se zvichibva pachimiro chechirangaridzo cheDRAM, nekuti zvichinyatso kuita aya mativi-maviri matrix emasero ayo rimwe nerimwe remaseru aya ane capacitor uye transistor.
Nekudaro kuenderera kuverengwa kwenzvimbo imwechete yekurangarira kunotungamira mukuchinja kwemagetsi uye anomalies izvo zvinokonzeresa kurasikirwa kudiki kwemutero mumasero akavakidzana.
Kana iko kuverenga kwacho kwakakura zvakakwana, sero rinogona kurasikirwa nemutengo wakakura zvakakwana uye inotevera yekumutsiridzazve haizowana nguva yekudzorera mamiriro ayo ekutanga, zvichikonzera shanduko mukukosha kwedata rakachengetwa. Muchitokisi.
Musiyano mutsva weRowHammer
Kusvika ikozvino, kushandisa ECC yaionekwa seyakavimbika nzira yekudzivirira kubva kumatambudziko akatsanangurwa pamusoro.
Asi vaongorori vakabudirira kugadzira nzira yekushandura mabhureki akataurwa izvo hazvina kumutsa kukanganisa kururamisa mashandiro.
Nzira yacho inogona kushandiswa pamaseva ane ECC ndangariro kugadzirisa data, chinja kodhi yakaipa uye chinja kodzero dzekuwana.
Semuenzaniso, mukurwiswa kweRowHammer kwakaratidzwa pamusoro, kana munhu akarwisa paakawana muchina chaiwo, zvakashata sisitimu zvadzokororwa kuburikidza neshanduro yezita remubati apt maitiro ekurodha pasi nekugadzirisa pfungwa yekusimbisa yezita remasaini. Siginicha yedigital.
Musiyano mutsva uyu unoshanda sei?
Zvinotsanangurwa nevaongorori nezvazvo uku kurwisa kutsva ndekwekuti kufamba kweECC kunoenderana nekanganiso yekugadzirisa zvinhu- Kana chidimbu chimwe chikashandurwa, iyo ECC ichagadzirisa iko kukanganisa, kana mabiti maviri akamutswa, chakasarudzika chinokandwa uye chirongwa chinomiswa nechisimba, asi kana mabiti matatu akachinjwa panguva imwe chete, iyo ECC inogona kusacherekedza shanduko.
Kuti uone mamiriro ezvinhu pasi pekusimbiswa kweECC kusingashande, Maitiro ekusimbisa akafanana neaya emujaho akagadzirwa ayo anotendera kuongorora mukana wekurwiswa kweimwe kero mundangariro.
Maitiro acho akavakirwa pachokwadi chekuti, kana uchigadzirisa chikanganiso, nguva yekuverenga inowedzera uye kunonoka kunoguma kuri kuyerwa uye kunoonekwa.
Kurwiswa kwacho kwakadzikiswa kuyedza kwakateedzana kushandura chidimbu chimwe nechimwe zvakasiyana, zvichitarisa kubudirira kweshanduko nechitarisiko chekunonoka kunokonzerwa nenzvimbo yeECC.
Naizvozvo, muchina kutsvaga kweshoko kunoitwa nematatu akasiyana mabhii. Muchikamu chekupedzisira, zvakafanira kuti uve nechokwadi chekuti mabheti matatu anogona kuchinjika munzvimbo mbiri akasiyana, uyezve edza kushandura kukosha kwavo kamwe chete.
ari Vatsvagiri vakabudirira kuratidza mukana wekurwiswa pamaseva mana akasiyana ane DDR3 memory .
En Chiratidziro chinoratidza kuti kutsvaga musanganiswa unodiwa wemabiti murabhoritari pane dura server zvinotora maminetsi makumi matatu nemaviri.
Kuita kurwisa sevha inomhanya kwakanyanya kuomarara nekuda kwekuvapo kwekukanganiswa kunovapo kubva muchiitiko chekushandisa.
Mune masisitimu ekugadzira, zvinogona kutora kusvika pavhiki kuwana musanganiswa unodikanwa wemabhiti anochinjika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Maitiro matsva eRowHammer akagadzirwa kudarika ECC dziviriro
ZveMambo: Strategic RPG Inounza Kwidziridzo kuLinux
LIBRECON 2018: pfupiso yemusangano